Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo ka bilaabmay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo ka bilaabmay
October 7, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug ayaa saakay oo Jimce ah ka bilaabmay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Sida ay sheegeen dadka deegaanka, dagaalka cusub ayaa yimid kadib markii maleeshiyaad kasoo jeeda Galmudug ay weerar kusoo qaadeen fariisimaha ciidamada Puntland ee xaafada Garsoor.
“Dagaalka wali waxa uu ka socdaa xaafada Garsooor… wali waanu maqlaynaa,” mid kamid ah dadka deegaanka Gaalkacyo oo magaciisa dib u dhigay ayaa sidaa u sheegay warsidaha Puntland Mirror.
Labada maamul ee Soomaaliyeed ayaa sanadkii hore ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo.
Faahfaahin dheeri ah dhawaan sug.
Jowhar-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, Maxamed Cabdulle Fiidow ayaa ku dhaawacmay weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen gaadiid uu la socday oo ka tagay magaalada Jowhar kuna sii jeeday Jalalaqsi, sida ay wararku [...]